PERIWINKLE: ISTICMAAL, SIFOOYIN DAAWEYN IYO KA HORJEEDA - DAAWADA DADWEYNAHA
Qodobbada waxtarka leh ee periwinkle: codsiga daawada dhaqameedka iyo dhaqanka iyo ka hortagga
Ku saabsan waxa kaliya ee daawada qaran iyo kuwa dhaqameed aanay iman, iyo wixii aan loo baahneyn daaweynta cudurrada.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah habka ugu wax ku oolsan ee sahlan loo heli karo ee daaweynta cudurka periwinkle.
Kani waa warshad caleen ah oo ka caawin karta qofku inuu la qabsado dhammaan xanuunkiisa.
Laakiin periwinkle, marka lagu daro hantidooda daaweyn ballaaran, ayaa leh tiro ka hortag ah. Waxyaalahan oo dhan, oo waan fahmi doonaa maqaalkani.
Waxyaabaha kiimikada ee periwinkle
Noocyada kala duwan ee periwinkle waxaa ku jira kiimiko kala duwan. Vincamine waxaa laga helay periwinkle yar, iyo casaan - samatabbixin iyo vincaleoblast.
Laakiin gabi ahaanba dhammaan noocyada waxaa jira alkaloids of taxane indole. Vinca herb sidoo kale waxaa ku jira ascorbic acid, qadhaadh, carotene, rutin, fareeshka, saponins.
Ma taqaanaa? Caleemaha Vinca waa kuwo la yaab leh oo adag waxayna joogteeyaan muuqaal cusub, xataa barafka. Periwinkle, oo laga soo wareejiyey kaynta si beerta ama beeraha, waa calaamad u ah midnimada. Goobta lagu dhex beeray qabuuraha waxay calaamad u tahay xasuusta wanaagsan iyo jacaylka weligeed ah.
Faa'iidooyinka waxtar leh iyo farshaxanka ee periwinkle
Periwinkle waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada noocaas ah: hypertension, xaaladda neurotic, arrhytmias, dhibaatooyinka dhirta iyo xididada. Waxa kale oo uu yareynayaa xididdada dhiigga ee dheecaanka leh, wuxuu kordhiyaa jiritaanka ilmo-galeenka iyo diureed.
Daawada dadweynaha, waxaa loo isticmaalaa sidii qalab gaar ah oo nadiifinta iyo joojinta dhiigga. Tinctures iyo decoctions waa in la sameeyaa oo la qaadaa haddii aad qabto: cagajugleyn, qallayl, shuban, qandho, xanuunka ilkaha, qufac muddo dheer, dhalmo la'aan.
Wuxuu sidoo kale si fudud u kicin karaa daaweynta qaaxada, wuxuu maskaxda ka jaraa mindhicirka maskaxda. Wax ku ool ah daaweynta neerfaha wajiga iyo polyneuritis.
Haddii aad dhibaato ka qabto maqaarka wejiga, markaa waa inaad si fudud ku dhaqdaa decoction of periwinkle.
Waa muhiim! Daawo dhaqameedku waa fiican, laakiin raac talada dhakhtarkaaga markaad daaweyneyso jirooyinkaaga. Ha sameynin isdifaacid dheer.
Diyaargarowga ku salaysan periwinkle ee daawada dhaqameed
Periwinkle wuxuu ku badan yahay daawada dhaqameed. Isticmaalka periwinkle marwalba waxtar u leh caafimaadka dadka, haddii loo isticmaalo qiyaasta saxda ah.
Daawooyinka noocan ah waxaa laga sameeyaa sida: Vincamine, Vincathon, Devincan, Vincristine, Vincapan. Aan fiirino mid ka mid ah iyaga.
Dawadani waxay kobcinaysaa dheef-shiid kiimikaad ee habka dhexe ee neerfayaasha, waxay tirtirtaa xididdada dhiigga waxayna hagaajisaa wareegga maskaxda.
Waa in la qaadaa haddii aad haysato: Feejignaanta waa mid aad u dhib badan, xasuusta xasaasiga ah ee da 'weyn, wareegga maskaxda, madax xanuunka, iyo madax xanuun. Haddii aad naaska nuujiso ilmo, qaadashada walaxadani waa ka hortag.
Mid kale oo ka mid ah daroogooyinka ku salaysan periwinkle, kuwaas oo siinaya unugyo leh oksijiin, waxay xoojisaa waxqabadka maskaxda, waxay hagaajisaa wareegga dhiigga iyo maskaxda.
Waxay keentaa saameynada cilladahan: finan maqaarka, dhaksharka, waxyeellooyin kala duwan ee falcelinta xasaasiyadda, hoos u dhigista cadaadiska dhiigga. Isku-daboolida dadka ku dhacay infekshanka miyir-wareerka ama waxay qabaan arrin xasaasiyad.
Waxay xakameysaa dhawaaqa dareeraha waxayna saameysaa hoos u dhaca maskaxda dillaacsan, wuxuu dejiyaa nidaamka neerfaha dhexe, wuxuu leeyahay saameyn heer sare ah. Daaweyntani waa in la qaadaa haddii aad qabto: takhtarka dareemayaasha ee neurogenic, dhiigkarka 1 iyo 2 darajo iyo neurosigyada kala duwan.
Waxay ka kooban tahay periwinkle Rose soo saaro.
Dawadani waxay iska leedahay wakiilada daaweynta kiimikada. Marxaladda metaphase, vincristine waa qaybta unugyada.
Haddii aad u isticmaasho qiyaasta sare, waxay xakameyn doontaa qaabka DNA iyo RNA.
Waa muhiim! Waxa kaliya oo la maamuli karaa oo kaliya hal mar asbuucii. Gali si taxadar leh iskudhafka siilka si toos ah xudunta laf-dhabarka waa mamnuuc!
Daawadan waxaa lagu sameeyaa iyada oo ku saleysan nabar yar yar. Waa inaad qaadatid haddii aad qabto dhibaatooyin xagga caafimaadka ah ee soo socda: neurogenic tachycardia, dawakhaad joogto ah, hypertension arterial, oo ka sii daraysa xasuusta iyo foojignaanta dadka waayeelka ah, maqalka iyo aragga, maqaarka haweenka, madax xanuun, fekerka horumarka iyo sirdoonka carruurta iyo dhallinyarada.
Qiyaasta saxda ah iyo isticmaalka joogtada ahi waxay kaa caawineysaa inaad la qabsato dhammaan cudurradan.
Sida loo diyaariyo oo loogu kaydiyo ujeedooyinka caafimaadka ee geedaha Vinca
Periwinkle waxay leedahay sifooyin badan oo bogsiin ah waxayna keeneysaa wax aad u wanaagsan caafimaadka dadka oo aan u baahannahay inaan xallino hawlaha ugu muhiimsan: sida loo habeeyo iyo u diyaargaroobo daaweynta. Xeerarka ugu muhiimsan ee ururinta iyo kaydinta periwinkle:
Uruurinta qiimaha periwinkle bilaabid guga iyo soo afjaridda July.
Iska yaree waa in aan ka yareyn 3-5 cm dhulka.
Si aad u soo baxdo warshad iyada oo xididdadiisa ay mamnuuc tahay.
Ka dib marka la ururiyo caleemaha, ubaxyada iyo ubaxa, waa in si taxaddar leh loo nadiifiyaa qashinka shisheeye.
Waa lagama maarmaan in la qalajiyo warshadda hawada furan, iyada oo heerkulna aan ka yarayn 40 ° C.
Haddii cimiladu tahay qorrax iyo qallalan, markaa periwinkle ayaa qalajin doona usbuuc gudihiis.
Periwinkle waa warshad sun ah, sidaa daraadeed waxay ka fiican tahay inaad ka shaqeyso gacmo gashi iyo gacmaha si fiican u dhaqsiyo kadib.
Alaabta ceeriin ee la diyaarin karo waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan 2 sano.
Rijeetooyinka daawada dhaqameed ee daaweynta cudurrada kala duwan
Periwinkle waxaa loo tixgeliyaa daaweyn caalami ah, iyada oo isticmaalkeeda daaweynta dhammaan cudurrada bini-aadanka waxaa lagu dhaqaa daawada dhaqanka iyo dhaqanka. Haddii aad raacdo dhammaan tilmaamaha oo aad u qaadato daaweynta si dhab ah, markaa waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho si aad u bogsiiso xanuunkaaga.
U gaabinta dhuun xanuunka
Haddii aad qabto cune xanuun, markaa faleebada periwinkle ayaa si deg deg ah kuu fududeyn doonta labadoodaba iyo cudurkan sida angina. Waxaad u baahan doontaa 1 qaado oo caleemo yaryar ah iyo galaas biyo ah. Isku qas isaga oo isku kari ilaa 20 daqiiqo.
Waxaad siisaa waqti si aad u qaboojiso oo soo dheji, ka dibna xaddid oo ku dar biyo qabow oo la kariyey si aad u sameyso galaas. Gargle 3 jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Periwinkle waxay ku noolaan doontaa ilaa ugu yaraan hal dhibic oo biyo ah oo weli ku jira weelka ay ku taal.
Anemia (dhiig yaraan)
Tincture Periwinkle leh dhiig yaraanta ayaa ka kooban caws iyo ubaxyo periwinkle. Waxaan tirineynaa 3 xabbo oo qallalan oo qallalan oo buuxi leh 200 ml oo biyo ah, qaso. Waxaad u baahan tahay inaad wax yar cabto, ilaa 6 jeer maalintii.
Tincture periwinkle waxay saameyn wanaagsan ku leedahay maraakiibta maskaxda, waxay yareeyaan muruqyada waxayna yaraynaysaa madax xanuun. Qaado 10 g oo caws ah oo ku adkee 90-100 ml oo vodka ah, oo meel dhigaya meel madow 3 toddobaad. Qaado waa inay ahaataa 10 dhibcood 3 jeer maalintii.
Haddii aad tincture aad muddo dheer, waxaad si dhakhso ah u samayn kartaa decoction ah. Iskeelo hal qaado oo ka mid ah geedo yaryar oo ka buuxi 220 ml oo biyo ah, karkariyo kuleylka hooseeya ilaa 15 daqiiqo, qabow oo tuujin faleeri. Qaado 1/3 koob oo 3 jeer maalintii.
Tincture Periwinkle ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si kor loogu qaado awoodda lab ah. A shaah ah ee caleemo la jajabiyey ku shub 1/4 litir oo biyo ah. Karkari isku dar ah ilaa 7 daqiiqadood. Waa lagama maarmaan in la adkeeyo meel mugdi ah maalintii oo dhan. Ka dib marka la rabo in la sifeeyo oo la qaado shaaha 2 jeer maalintii maalintii 20 daqiiqo. ka hor cuntada.
Dhiirrigelinta, madax-xanuunka dhanjafka
Haddii aad leedahay cadaadis dhiig oo sarreeya iyo madax-xanuunka dhanjafka, markaa periwinkle ayaa kaa caawin doonta dhibaatadan. 2 qaado oo la jajabiyey caleemaha periwinkle ku shub 2 koob oo biyo nadiifa. Karkari muddo 10 daqiiqo ah. Ka dib markaad qaboojisid iyo cadaadis, qaado 1/3 koob oo 3 jeer maalin walba cuntada ka hor.
Cagaarshowga, boogaha nadiifka ah iyo boogaha
Isticmaalidda periwinkle ee marinka dibedda ah, ee lagu dhaqo dermatitis, boogaha iyo boogaha. Qaado 2 qaado oo ah geedo qallalan oo la qalajiyey oo ku shub hal koob oo biyo karkar ah. Karkari muddo nus saac ah. Ka dib markaa, qaboojin, cadaadis iyo tuujin.
Ma taqaanaa? Marka Jarmalka iyo Austria, gabdhaha ayaa la yaabay haddii ay guursan lahaayeen sanadkan ama maaha, dharka ubaxyada cawska iyo beeraha.
Sida loo isticmaalo periwinkle ee masaxaadda
Periwinkle waa daaweyn caalami ah oo ay ka heshay codsigeeda xitaa cosmetology. Waxay ku jirtaa qayb ka mid ah maqaarka iyo alaabada daryeelka jirka (xitaa carruurta). Qaar ka mid ah shirkadleyda waxay ku daraan inay kor u qaadaan codka kiriimyada iyo kiriimyada.
Periwinkle ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in la sameeyo siyaalo kala duwan oo ah naas-nuujinta iyo ur aan caadi ahayn ee cadar. Dhammaan maaliyaddan, boqolkiiba inta ka kooban waa in aysan ka badnaan 10%.
Xitaa tixgelinta in alkaloolka qalin-wadaha ah uu qaado dhowr nooc oo ah walxo wanaagsan, oo saameeya jidhka bini'aadamka, waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto. Ha is-daweyn oo la tasho dhakhtarkaaga ka hor inta aadan isticmaalin decoction, tincture ama iibsashada daawooyinka.
Xusuuso taas periwinkle - tani waa jeexan sun ah iyo soo dhaweyn kasta oo aan sax ahayn ama ka soocitaanka qiyaasta daawada loo qoray waxay keeni kartaa in ay sii xumaato wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Waa muhiim! Si aad u qaadatid wax daawo ah daawo dhaqameed iyo dhaqameed ayaa si adag loo mamnuucayaa uurka iyo nuujinta.
Iska ilaali naftaada iyo caafimaadkaaga, iyo caafimaadka dadka aad jeceshahay.